कथा: कठै बरा ! मेरो कालो भड्डु !! - नेपालबहस
कथा: कठै बरा ! मेरो कालो भड्डु !!
| १५:१०:०४ मा प्रकाशित
बा’ ले भन्नुहुन्थ्यो,
धिरा थापा मेरी हजुरआमा रे !
मेरो जन्मको अड्कलै थेन । बाजेको जवानीले भित्र्याएछ बजै राणाकालमै । उसबेला बालविवाह मामुली र अपरिहार्य मानिने । पुग नपुग ८ वर्षकी मेरी बजैको लगनपछि माईतै बिते ४ वर्षहरु । रजश्वला नहुँदै कन्यादान गर्नुपर्ने उसबेलाको रितिथिति । बिहेपछि पहिलो माईती सुल्ट्याईयो । बजै उतै माईतिमा बसिन् । बाजे भने खाली हात घर फिर्नु भएछ । झण्डै ११ वर्षको बाजेको कलिलो मगज र जवानीमा कुनै अनौठो, अमिट र अमर छाप पारेन बिहेले ।
सिंजाको शितकालिन राज्य दुल्लू । यसैको रावतकोटी विष्ट खानदान अलिक हुनेखाने परिवार, मेरी बजैको माईति । त्यहीबाट भित्रियो कन्यादानमा कालो भड्डु । भड्डु सायद अचेलकाले जान्दैनन् , चिन्दैनन् । कन्यादानमा भड्डु पाउनु सानोतिनो कुरो थेन । हुने सक्नेले दिन्थे । भाग्यमानीले पाउँथे । भड्डु भित्रिएपछि मेरो घरको शानै अलग । भित्र्याउँदा पनि छोइछिटो बारियो । बलिया भक्त बाजेले बोकेछन् । सबैको चियो थियो यसको अघिपछि । भड्डु दान थियो । मेरै घरले बनायो कालो ।
बज‌ै १२ कि पुगिन् । फेरि बाजेहरुका तातीले उनलाई लिन माईति घेरे । बाटो रिउताएपछिको पोईली घरको स्वाद बिनाकी मेरी बजै आफ्नो घर छिरिन् । पुरै विराना मान्छे । नबोलेका लोग्ने । नभेटेका देउरानी जेठानी । उस्तै नन्द देवरहरु पनि । सक्दोपुग्दो ढिकिजांतो, कुटो कोदालो र धारापंधेराले बढाउँदै गयो जवानी अनि परिपक्कताका रहरहरु मेरी बजैमा ।
बाजेबजैको घरजामपछि सन्तान जन्मे, बढे । त्यसपछि यसैगरी जम्यो मेरा बा आमाको घरबार । रोजगारी, बण्डाल र नुनतेलको हाटका लागि हरेकसाल बतासिनु पर्थ्यो मेरा बा प्रदेशतिर । बा यसैगरी पातलिदै गए । रोटो र भोटोको ठिक ठेकान लाउने मेसो बन्यो नयाँमुलूक । मेरा बा’ले नयाँ मुलूकको झाडी र झप्टि फांडेर गोठथरि बनाउन मै दाम्पत्य जीवनका कैयौं रहरहरु चेपे । सुकाए अनि मक्काए । उसबेला बा’ले हानेका झाडी झप्टिका कुनै नामोनिशान छैनन् रे यो बर्दियामा ।
उता कालो भड्डुले चिनेको मेरी बजै बाहेक कोही थेन घरमा । बजैको अगाध मायाको चिनो थियो कालो भड्डु । माईतिको दान कालो भड्डु मेरी बजै संधै जाहात कोठा मात्र (पुजाकोठा) राख्नुहुन्थ्यो । चाडवाड, न्वांखि र विशेष दिनमा मात्रै भड्डु भान्सा पस्थ्यो । सुन जस्तै मिसौटे धातुको कसिलो भाँडो थियो यो । विशेष पर्व र चाडवाडमा मासुका चौटा पकाउने यो भड्डुले दिने स्वादै अलग थियो ।
वि. सं.२००२ साले मेरा बा एक वर्षमै भड्डुको सदस्य भए पनि खासै स्वाद पाएनन् । बजै स्वादको बखान गर्थिन् । बा डिच्च हांस्ने । स्वादै नपाउने । यसैगरी बिते ती दिनहरु । २००७ सालतिर मेरा बाको जस्तै भड्डु ल्याए बीपी बापुले । यो भने भारतबाट कन्यादान थियो । वनारसी भड्डु । भड्डु भने प्रजातान्त्रिक भड्डु रे । उनले बहुदल पकाउन थाले । मेरी बजैले चौटा । हामीलाई दुवै रसिला । खुबै रसिला बने दुवै भड्डुहरु ।
बापुले नौलो प्रविधिको भड्डुमा बहुदलीय चौटाहरु खुबै जाके । पकाउन कोशिस गरे । घरिघरि आफ्नै चौटाहरु बझारिरहे । उछिट्टिरहे । आगोलाई ठोसे । दाउरालाई दोषे । उनका चौटाहरु अधकल्चा निल्नु न ओकेल्नु भए । पुष १५ को वनभोज नआउँदै उनको भड्डु खोसियो । उनै दोषी भए । उनै भोकै भए । मेरो काले भड्डु भने मनमत्त भै सुगन्धित चौटा पस्किरह्यो् । यसपछि भने मेरी बजैको उन्मादले मात्तिएको मेरो भड्डु बिस्तारै आमाको कजाईमा पर्यो । बाआमा कालेभड्डु बोकी मुग्लान झर्नु भो । बजै पहाडमै । अब भने मेरी बजैसँग मेरो न्वारनमा पहाडी चोखो तेल बोक्ने ठेकी र निगालि चोयाको डोको मात्रै रहे ।
बाका बढ्दो जहान । फिरफिरे हाम्रा रहरहरु । सानोतिनो कमाईले बा छिनछिनमा घुंडा टेक्ने सरि हुनुपर्थ्यो । बा १५ वर्षे हुँदा खोसिएको बापुको भड्डुको रमिते मात्र हुन सके मेरा बा । अचाक्लि स्वादिलो त्यो भड्डु बापुकै खानदानी बन्यो उसबेला । उनैले ल्याए । उनैकाले कज्याए । उनीहरुले नै खोसाए । यसमा कसलाई के दोष दिनु । बा कलिला रमिते बने । भड्डु र कन्यादान धोका ठान्ने मेरा काका ईन्द्रजितको निद हराम गरियो । उनी पोखरा पुगे । तिब्बत हानिए । कठै बिचरा काका अलि क्रान्तिकारी ठहरिए । खेदिए खेदिनुसम्म ।
मेरो कालो भड्डुले दिनुसम्म साथ दियो बालाई । बाको जोहो, आमाको मुलधन बन्यो मेरो भड्डु । सकीनसकी गरेको जोहो र पैंचोका पर्वहरुका चौटा उमालिरह्यो मेरो भड्डुले । तल रापिलो अगेनुको आगो । माथि खरानीले सिंगारिएको मेरो भड्डुको गलपासो थियो डल्ले लोटा । लोटाभरीको चिसोपानी र भड्डुले खेद्नु खेद्थ्यो चौटाहरुलाई । वैरागिने गरि उमाल्थ्यो झोललाई । साँझको भुटुनमा रन्थनिएका चौटाहरु रातभरि गलस्त हुन्थे । भोलि बिहानका रसिला चौटाहरु लुछ्न म र मेरी बहिनीहरुले कैयौं रातका सपनाहरु गुमाउथ्यौं । हुन पनि अनुपम स्वाद पस्कने मेरो भड्डु अहिलेको प्रेसर कुकर र राईस कुकरको पुर्वज हो जस्तो लाग्छ । विधि उस्तै । प्रविधि उस्तै ।
यता मेरो भड्डु मस्त थियो । उता भने बापुहरुले गुमाएको वनारसी भड्डु विलाप गर्दै तैरिदै भाग्यो । कुन जेणले अंठ्यायो । मेरा बालाई के थाहा । बापुहरुको भड्डु रोईलो र तानातानले सीमा नाघ्यो । अमिलो मन र धमिलो भाग्यले डोर्याएका बापुहरु नक्खु र भद्र दरबार पुगे । सपनाको शिरानीमा पोषिलो भड्डु माग्दामाग्दै बापुहरुका वर्षौं बिते ।
रहर, भाग्य र सपना मिचिए बापुहरुका । नख्खु र भद्र दरबार पुग्दा मेरा काका ईन्द्रजितका सखीहरु उतै थिए । सपनाको एकताले बांधिएका ईतरहरुसँगै बिते दशकहरु । तीन दशकपछिको दशगजाले भित्र्याएको ढुलमुलसँगै सडक बौलायो । मेरा काका सखी र बापुको दरबारको साङ्लो तोडियो । आकास रंगियो । अब भड्डुका छिर्का अनि वाफले निलगंगामा मनोरम भाग्यरेखा कोर्ने उद्घोष गरियो । बिचरो भड्डु १ बापुहरुका सपनाको खिचडी के पकाउन सक्थ्यो । छिनछिनमा लुछियो । छिनछिनमा बझारियो । हरपल उ पाक्न कां सक्थ्यो र । बापुहरुकै झापडमा थिलियो । आफै टुट्यो । आफै टुटाईयो ।
यता भने मेरो भड्डु दैनिकी उपयोगले मांझिदै थियो । बलिष्टताको हजारौं पुकारले गजक्क फुलेको थ्यो मेरो भड्डु । बढेको आयतन । हुर्के बढेका सन्ततिहरु । उन्मादै उन्मादले चौटाहरु नाच्थे । मेरा बाजेको पनाति पुस्ता भित्रिएपछि मेरो परिवारको आकारै बदलियो । ठूलो परिवार, ठूला सपना हुर्किदै गए मेरो घरमा । पुरै जहानलाई पोषिलो खाना र स्वर्गिय आनन्द दिने मेरा बा र बाजेको परिकल्पना थियो । मेरो भड्डु अब झण्डै दुईखण्ड बढिसकेको थियो ।
स्वाद र सन्तुष्टिका बजारहरुमा अनगिन्ती पहुनाको रोजाई थियो मेरो भड्डु । मेरा संधियारहरु उत्तरबाट किन्ताङ् र दक्षिणबाट नरदेव सधैं चियोचर्चो गरिरहन्थे । उनीहरुको घरिघरिको ढुंङ्गा हनाई र स्याबासीले मेरो भड्डु ढुलमुलाई रह्यो । हामीले छेक्नै सकेनौं । देख्नै सकेनौं । बरु सांक्षी, मतियार र घोर आलोचक बन्यौं उनका । उता बापुका सन्ततिले पनि स्वीकार्दै सपनाहरु जोडिदै थिए यसमा ।
हाम्रै आफ्ना सानासाना खण्डहर रहरहरु बढे । हुर्के । लोभ अनि आशालाग्दो स्वादिलो मेरो भड्डु तानातानमा पर्दै गयो । हामीले नै उछिट्यायौं । हामीले नै छिद्र छिद्र बनायौं । हामी पाका । हामी नै स्व जानकार बन्यौ । पाक्दै र पस्किदैको मेरो भड्डु बझार्यौं सकेजति ।
हिजो मात्र मेरी बजैको श्राद्धको तिथि । आज भड्डु दुईफ्याक भयो । स्वादिला चौटाहरु भुईंभरि धुलेआम भए । न तिमीलाई । न मलाई । मेरो भड्डु जो धेरै वर्षहरु मौन बस्यो । उसको मौनताले हामी रनालिएनौं । एक्ला एक्लैको पाकताउली बन्दै मेरो भड्डु बिना स्याहार कालिदै गयो । मेरा बा , बजै, बापु र हामी सबैको अधकल्चो भोक छताछुल्ल भयो । हामीले आपसमा हेरिहेरी खित्का छोड्यौं ।
सुनौलो रंग र भविष्य बोकेको मेरो भड्डु सायद अब पाक्नै नसक्ने गरि हामीले नै कालो बनाई छाड्यौं । कठै बरा ! मेरो कालो भड्डु !!!!
कथा : जन्तिबास ३ हप्ता पहिले
कथा : काेराेना कहर र अवसर १ महिना पहिले
कथा: कर्णकाे बयान ४ महिना पहिले
लगानीको अवसरः आजदेखि हाइड्रो कम्पनीको साढे १४ लाख कित्ता आईपीओ बिक्रीमा ५ मिनेट पहिले
भरतपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक आकस्मिक कक्ष बनाइने ८ मिनेट पहिले
हिमाली क्षेत्रमा बाँझो जमिनमा लोठसल्ला रोपणको तयारी १६ मिनेट पहिले
ललितपुर चेम्बर अफ कमर्शको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, अध्यक्षमा शाक्य निर्वाचित १७ मिनेट पहिले
पोल गाडेको दुई वर्षसम्म पनि उज्यालोमा बस्ने सपना अलपत्र ४२ मिनेट पहिले
मनकामनामा शनिबार मात्र चार हजारभन्दा बढीले दर्शन गरे ४८ मिनेट पहिले
मध्यपूर्वी तराईमा अचाक्ली बढेको चिसोले जनजीवन झन्झन् कष्टकर ५६ मिनेट पहिले
बोटमा पाकेर पहेँलपुर सुन्तलाका दाना जोगाउन किसानलाई सास्ती ३ घण्टा पहिले
बेनी–जोमसोम खण्डको काममा चरम ढिलासुस्ती १४ घण्टा पहिले
विराटनगर भन्सार र आन्तरिक राजश्व विराटनगरद्वारा राजश्व संकलनमा बृद्धि २१ घण्टा पहिले
साताको शेयरबजारः २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको कारोबार २१ घण्टा पहिले
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दैमा प्रतिगमन नहुने : मुख्यमन्त्री पोख्रेल १५ घण्टा पहिले
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ माघ ६ गतेसम्म भर्न सकिने, पहिलो दिनमा यति धेरैले दिए आवेदन ? २१ घण्टा पहिले
बर्जु तालमा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटनको ओइरो ४ दिन पहिले
विश्व ब्याडमिन्टनको बरियतामा प्रिन्सको छलाङ १ दिन पहिले
पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता ६ दिन पहिले
तरकारी बजारमा गभर्नरले गरे प्रभु बैंककाे क्यू आर कोड उद्घाटन ७ दिन पहिले
लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदा कांग्रेस चुप लाग्दैन : नेता पौडेल १५ घण्टा पहिले
सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि बन्द रहेका सिनेमा भवनहरु खोल्ने ६ दिन पहिले
भन्सार छली ल्याइएको ६ लाखको कपडासहित पिकअप भ्यान नियन्त्रणमा २ हप्ता पहिले
सर्वोच्चमा नेकपाविरुद्धको सुनुवाई स्थगित ३ हप्ता पहिले
ज्ञानेन्द्र पथमा प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रा ४ हप्ता पहिले
स्रोत नखुलेको ३७ लाख नगदसहित एक जना पक्राउ ६ दिन पहिले
ओली समुहको आज बिहान बसेको बैठक नौटंकी हाे : प्रचण्ड ४ हप्ता पहिले
आगामी माघभित्र जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गरिने ३ हप्ता पहिले
थाहा पाई राख्नुपर्ने कुरा :- कति बेला नुहाउँदा राम्रो हुन्छ ? २ हप्ता पहिले
स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रहरीबाट भएको कुटपिट प्रति राणाको चिन्ता ९ महिना पहिले
मजदुर दिवसको शुभकामना र कम्युनिष्ट सरकार ९ महिना पहिले
राष्ट्रको दाहिने हात, दाहिने आँखा सुदूरपश्चिम : राष्ट्रपति भण्डारी ११ महिना पहिले
आज १३२५ जना कोरोना संक्रमित थपिए, ९६६ डिस्चार्ज ४ महिना पहिले